JAAMAA TURTE – Beekan Guluma Erena
JAAMAA TURTE	Beekan Guluma Erena
Personal Category, Poems April 14, 2016WALALOO OROMOO	1 Comment
94SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
= = === = == = = =
Yoo dhalattu jaamaa turte waa hin argitu,
Firaaf diinas adda baastee hin hubattu!
Goondaa lafaa si ciniinuuf sitti yaa’u,
afuuffadhee baala cabseen sirraa dha’a!
Dhi’a aduus hiyya haadhakeen ciisaa ka’ee, waraabuudhaaf qeerransallee
Akka kanaan bullee bullee salgan geenyee!
Salgan geenyaan siif banamte jaamaan kee illee !!!
Obbolaankee kaan bineensaan nyaatamanii, gariin immoo guddifachaaf laatamani !!
Qaburaasaa jedhee taa’ee maqaa haaraa siif moggaasee,!
Ganda labee raqas baadhee, mataa qalmaas sitti guureen si guddise !!
Suubii kaanee Dallaa saaqnee horii baafnee kaloot-yaafnee , hora
hobaafnee gara qonnaatti biraa deemna dirreetti naqnee!
Qaburaasaan biraa hin hafu diina arginaan duukaa kaata!
Egaa animmoo muka koree siree yaabee, furuursaadhaan sammuu dhooseen lafa buusa!
Qaccee narkaa hiyyisiiseen jaldeessaafi qamalee , weenniidhaf shinbira
midhaan keessaa yaasa !!!
Halkan qorraas gadi hin teenye bonee buunee godoo teenyee midhaan
irraa booyyeefi xaddee eegaa bulla !!!
Laga ceenee aduu saafaan gaaras baanee
Gobaa utaallee arangamaafi tuufoo addaan ishee cirree,
Bosonuufi quruphee duukaa buunee baane,
Kara karaa waan arganne adamsina !
Qaburaasaan mataa maree naaf dammaqsa,
Anis alaammadheen eeboo koo itti dabsa !
Albeedhaan gorra’een lubbuu keessaa baasa , ilmooshee booji’ee,
geeraree itti sirbeen haadha irra ajjeessa!!!!
Haala kanaan utuu jirruu waliin baanee osoo galluu , qaburaasaan
mootiin Saree guyyaa tokkoof nattii Addan ba’ee kan hin beekne,
Harra garuu qofaa ba’ee jooraa oolee halkan dhufa!
Narkaa nyaatee, narkaa dhugee natti duta !!!!
Jaldeessiifi qamaleen midhaan koo fixanii isaan firoomani,
Utuunii ilaaluu horiin Dallaa keessaa waraabuufi qeerransaan narkatti
Maaloo yaa jarana maal jettu isin kana ?
Maqaa itti moggaasee sareen guddisetu na nyaachuuf wargama !
Diillookoo buqqisee hatuuf karra banaa!
Diina waliin ta’ee duulaa natti kaasa!
Na jalat- leenji’ee diina duukaa lolee anaan biyyaa baasa !
Saree koo maal taate ??Budaa Saree maaliitu ijasheen si nyaate ?
Bu’aan guddisakoo dhumnisaa kanadhaa !!
Jooree ijibbaadhee ollaa bitaafi mirgaa miilla koodhaan kaadhee
Harki si qallabee addanaan si ga’e ,maalif daaraa hara ?
Maalin maqe sitti !!???? Leencaaf si leenjifnaan adurree baqattaa!
Silaas maliin godhaa??
bara barri bade Saree harkaan guddisan qarriffaan jaatamma!
utuu naaf jiraate dhigaakeef hojeete?
anuu sin badhaassa akka luukaa dhugaa!
utuu ta’ee badee maliin godhaa eega?!
Roobeeraa Abdataa’ tiin
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa94SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← HAYYUU BARUMSA AMMAYYAA BU’UURE (HIIKAA-Abbaa Gammachis)
One thought on “JAAMAA TURTE”	BurqaaApril 15, 2016 at 6:56 pmPermalink	waan gaarii sammu nama haromsuu fi ergaa gaha waan argas dhagahas jiru kan ifaa galchuudha ol lati.